သင့်ရဲ့ဆီးနှင်းမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးနှင့်အတူ Off-piste နွယ်ဖွား၏အကောင်းဆုံး! - ULLER
Freeride ကိုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်လူသိများသည် နှင်းလျော ငါတို့သွားသောကျောက်ဆောင်များနှင့်အတားအဆီးများကိုရှောင်ရှားရန်၊ သင်ကလုံးဝဆင်းသက်လာသောဆီးနှင်းပေါ်မှဆင်းသက်လာမှုလုံးဝမရှိသောဆင်းသက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသောလမ်းကြောင်းများ၌ Freeride နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်းအမှန်တရားမှာမူစစ်မှန်သော freeride ကိုနှစ်သက်သူများသည်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများခုန်ချခြင်းနှင့်ကောင်းသောအမှုန့်နှင်းကျခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုနှစ်သက်ကြသည်မှာသေချာသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အချို့သောလူများသည် freeride ကိုအခြားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်တွဲဖက်ပြီးဥပမာ carcarve သို့မဟုတ်အစွန်းရောက်နှင်းလျောစီးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်အကြိမ်များစွာအသေးအဖွဲကိစ္စမျှသာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤကိစ္စတွင်အသုံးပြုသောနှင်းလျောစီးများသည်ဘက်စုံအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဘရူနိုင်းအပြင်ဘက်တွင်နှင်းထူထပ်သောနှင်းများ၊ နှင်းထူထပ်သောနှင်းများနှင့်လေ့ကျင့်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖမ်းမိသောကျောက်ဆောင်ဘားမှခုန်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရန်အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့အနေဖြင့်အလွန်ကောင်းသောအပြုအမူကိုတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစွယ်စုံသုံးပြီးဘက်စုံသုံးတဲ့အတွက် freeride ပုံစံမျိုးကပျဉ်ပြားတွေဟာစျေးကွက်ဝေစုတစ်ခုလုံးရဲ့တစ် ၀ က်နီးပါးကိုယူထားတာကြောင့်သူတို့ဟာအခြေအနေအားလုံးမှာကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာမခံထားတဲ့အတွက်သူတို့ဟာလမ်းဘေးကျားတွေဖြစ်ပါတယ်။ တောင်စောင်းတွေ၊ နှင်းဖုံးတွေ၊ ပိုက်တစ်ဝက်နှင့်သင်၏နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏တောင်စောင်းများပေါ်တွင်လည်းရှိသည်။
ကျနော်တို့ directional ပျဉ်ပြားအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်, ဆိုလိုသည်မှာသူတို့တစ် ဦး တည်းသာ ဦး တည်ချက်အတွက်တပ်ဆင်ထားဖို့ဒီဇိုင်းနေကြတယ်: ရှေ့, ရှေ့။ အစွန်အဖျားနှင့်အမြီးကိုအချိုးကျမဖြစ်သည့်အခါနှင်းလျောစီးသည်ညှိုးနွမ်းပုံသဏ္hasာန်ရှိသည်။ အမြီးသည်ပိုတိုသည်၊ ဘုတ်၏ရှေ့ထက်ကွေးသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် freeride ပျဉ်ပြားများတွင်ချည်နှောင်ခြင်းကိုအနည်းငယ်ထပ်မံချထားပြီးမြင်းစီးသူရဲ၏အလေးချိန်ကိုဘုတ်၏နောက်ကျောတွင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်ဤအချိုးမညီမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ အရာအားလုံးကိုတောင်မှ, သင်သည်ဤဘုတ်အဖွဲ့အမျိုးအစားနှင့်အတူ fakie လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်, သူတို့ကသူတို့အတွက်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်မဟုတ်။
Freeride ပျဉ်ပြားများသည်အလွတ်ပျဉ်ပြားများထက်ပိုမိုတောင့်တင်း။ ပိုရှည်သည်။ သို့သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောပျော့ပြောင်းပြီးအလွန်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အစပြုသူများအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် freerides သည်သင်ရှာဖွေနိုင်သည့်စွယ်စုံနှင့်စွယ်စုံနှင်းလျောစီးများဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်အခြေအနေအားလုံးနီးပါးတွင်သင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကောင်းမွန်သောအဆင့်တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
စကားမစပ်၊ “ အားလုံးသောတောင်ပေါ်” ဘုတ်များဖြင့်သင်“ နူးညံ့သော” သို့မဟုတ်“ အဆင့်ဆင့်” ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုသင်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤခညျြနှောငျခွားခွားခွားခွငျး (50 မှ 55 စင်တီမီတာအကြား) အတော်လေးကြီးမားသည်။ ဘုတ်ကိုစီးသူမြင်းစီးသူရဲပေါ် မူတည်၍ သူတို့၏ထောင့်များသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အနောက်ဘက်မှ ၀ မှ ၁၅ ဒီဂရီနှင့်ရှေ့တွင် ၁၅ မှ ၂၅ အကြားရှိသည်။ သို့သော်အခြားမြင်းစီးသူရဲသည်“ ဘဲ” နေရာတွင်လောင်းသည်။ အသန့်ရှင်းဆုံး freerider များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော float ပြုလုပ်နိုင်ရန်ချည်နှောင်ခြင်းကိုအနည်းငယ်ထပ်မံချထားသည်။ အမြဲတမ်းသူတို့၏အကောင်းဆုံးစုံတွဲကိုဝတ်ထားသည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်။
၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင်းလျော ၎င်းသည်အခြားသောလျှောအားကစားများမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည် စကိတ်ဘုတ်စီးခြင်း သို့မဟုတ် surfing ။ ၁၉၆၅ တွင်အင်ဂျင်နီယာ Sherman Poppen သည်သူ၏သမီးအတွက် Michigan ရှိ Muskegon တွင်ပထမဆုံးနှင်းလျောစီးဘုတ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာခြေထောက်အတွက်ဆုပ်ကိုင်စရာမလိုဘဲသစ်သားဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေ့တွင်ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ဟန်ချက်ညီစေရန်ကူညီပေးသည်။ Brunswik ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်အတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ဤအယူအဆသစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ရောင်းချရန်စတင်ခဲ့သည်။
ဤအချိန်လောက်တွင်နှင်းလျှောစီးသူ Surfer Dimitrije Milovich သည် skis အရွယ်အစားရှိဘုတ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သည်၊ သို့သော်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်မှာ Winterstick ဟုလူသိများသည့်အမှုန့်နှင်းများပေါ်သို့စီးဝင်သွားနိုင်သည်။
Sherman Poppen သည် ၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နှင်းလျောစီးခြင်းကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်လူကြိုက်များခဲ့သော်လည်းစပိန်သို့ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
လူသိအများဆုံးကတော့ Freestyle, Freeride, Parallel Slalom, Boardercross နဲ့တောင်၊ Cross-country snowboarding တို့ဖြစ်တယ်။ အလွတ်အတွင်းမှာအောက်ပါတို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
slopestyle: ခုန်, ရထားလမ်းနှင့်အံဆွဲ။ ၎င်းသည် ၂၀၁၄ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှဖြစ်သည်။
အားသာချက်ကိုယူ။ သင်၏နှင့်အတူလွတ်မြောက်ရန် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် အကောင်းဆုံးဘူတာသို့ - Baqueira-Beret (ကျွန်ုပ်၏ယခင်ပို့စ်တွင်သင်အချက်အလက်အားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်)၊ Astún, Candanchú, Formigal, Cerler နှင့် Sierra Nevada ။
သူတို့ထူထောင်ခဲ့သောနှင်းပွင့်များကိုလည်းပျော်မွေ့ပါ။ သူတို့ကအလွန်အလွန်ကြီးစွာသော shapers အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရသာအတွက်အကောင်းဆုံးမှာမူတရားဝင်ဖြစ်သည်။ မြင်းစီးသူရဲများအကြားရှိလေထုသည်လည်းမယှဉ်နိုင်ပါ။
တစ်နေ့လုံးသင့်ကိုတံတွေးထွေးစေမယ့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအချို့ ... ဒါကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။
သင်၏အားကစားပစ္စည်းများကိုအမြဲတမ်းသယ်ဆောင်ရန်သတိရပါ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်,ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစွာပြုလုပ်ထားသော်လည်းအားလုံးအထက်တွင် ... ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်လိုသည်။
သင့်အမေသည်မွေးဖွားအားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမအထူးနေ့တွင်သူမကိုဘာပေးရမည်ကိုသင်မသိပါ။ ငါတို့ကိုစိတ်မပူပါနဲ့! မင်းကိုမင်းအမေနဲ့ခေါင်းအုံးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်မင်းကိုလှပတဲ့အတွေးအခေါ်တွေအများကြီးချန်ထားပေးခဲ့တယ်။